पाटन अस्पतालको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन चोरी
ललितपुर, २८ जेठ-पाटन अस्पतालको आइसीयू वार्डमा रहेको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन चोरीमा आरोपमा २ जना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सोही अस्पतालका डा. प्रविन मिश्र र महोत्तरीको बर्दिबासका रमेश कुमार शर्मा रहेका छन् ।
डा. मिश्र बर्दिबासमा रहेको बी एण्ड बी पोलिक्लिनिक सञ्चालक हुन् भने शर्मा अहेव रहेको बुझिएको छ । प्रहरीले मर्मतको बहानामा चोरी गरेको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन नयाँ बानेश्वरमा लगेर राखेको अवस्थामा फेला पारेको एसएसपी राईले जानकारी दिए ।
उनीहरूले १७ जेठ बिहान साढे ८ बजे पाटन अस्पतालको आइसीयू वार्डमा रहेको पार्टेवल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन मर्मत गर्न कम्पनीबाट आएको भन्दै झुक्याएर पार्टपुर्जा चोरी गरेका प्रहरीले जनाएको छ । अधिकांश पार्टपुर्जा चोरी भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो ।
सुडान घोटालाका दोषी पूर्व आईजीपी ठकुरी आज जेल मुक्त हुँदै